हवाई भाडा बढ्यो : कहाँको कति ? - Movies Trends
हवाई भाडा बढ्यो : कहाँको कति ?
काठमाडौं : निजी क्षेत्रका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा बढाउने निर्णय गरेका छन्। वायु सेवा सञ्चालक संघले सोमबारदेखिa लागु हुने गरी आन्तरिक उडानको हवाई भाडा वृद्धि गरेको छ। संघको आइतबार बसेको बैठकले न्यूनतम ४५ रुपैयाँदेखि अधिकतम दुई सय २० रुपैयाँसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको सिम्रिक एयरलाइन्सका बजार व्यवस्थापक प्रज्वल थापाले जानकारी दिए।
नेपाल आयल निगमले आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ बढाएर ८७ रुपैयाँ बनाएको थियो। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेलगतै संघले पनि भाडा वृद्धि गरेको उनले जानकारी दिए।
संघले नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरेपछि निरन्तर रुपमा हवाई भाडाका पनि समायोजन गर्दै आएको छ।
संघले हवाई इन्धनको मूल्य बढेपछि फ्युल चार्ज शुक बढाएको थापाले जानकारी दिए। यात्रुलाई हवाई भाडा बढेपनि सेवा प्रदायकले पाउने नाफाका भने कुनै वृद्धि नहुने थापाको भनाइ छ। इन्धनको मूल्य बढेपछि सोही अनुसार प्रत्येक गन्तव्यको उडानमा खर्च हुने इन्धनको तुलनामा मात्रै हवाई भाडा बढेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य सिमराका लागि ४५ रुपैयाँ भाडा बढेको छ भने सबैभन्दा लामो दुरीको गन्तव्य धनगढीको भाडामा दुई सय २० रुपैयाँ वृद्धि भएको थापाले जानकारी दिए।
अब सिमरा जाने यात्रुले प्रति टिकटको मूल्य तीन हजार पचास रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ भने धनगढी जान १२ हजार तीन सय २० रुपैयाँ तिर्न पर्नेहुन्छ। यस अघि सिमराको भाडा तीन हजार पाँच रुपैयाँ र धनगढीको भाडा १२ हजार एक सय रुपैयाँ थियो।
थापाका अनुसार माउन्टेन फ्लाइटमा एक सय ७०, पोखरामा ८०, भैरहवामा एक सय ५, भरतपुरको उडानका ५५ र विराटनगरको उडानमा एक सय २० रुपैयाँ बढेको छ। यसैगरी नेपालगन्जको उडानमा एक सय ६५, भद्रपुरको उडानमा एक सय ५०, जनकपुरको ६० र तुम्लिङटारको उडानमा ९५ रुपैयाँ वृद्धि भएको थापाले जानकारी दिए।
अब हवाई यात्रुले माउन्टेन फ्लाइटका लागि ११ हजार २०, पोखरा जान ४७ सय ३०, भैरहवा ६ हजार ५५, भरतपुर ३५ सय पाँच र विराटनगर जान ७२ सय २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी नेपालगन्ज जान ९५ सय ६५, भद्रपुर जान ८७ सय ५०, जनकपुर चार हजार १० र लुम्लिङटारका लागि ५७ सय २० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको थापाले बताए।
संघले हवाई भाडा एकरुपता ल्याउन मूल्य समायोजन गरेपनि आन्तरिक उडानमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा यात्रुले प्राय सबै गन्तव्यमा जाँदा फुल फेजको भाडा तिर्नुनपर्ने अवस्था आएको थापा बताउँछन्।
आन्तरिक उडानमा राष्ट्रिय ध्वाजबाहक नेपाल एयरलाइन्स बाहेक निजी क्षेत्रमा सिम्रिक, बुद्ध, यति, सौर्य, श्री, समिट, ताराले यात्रुलाई सेवा दिँदै आएका छन्। आन्तरिक उडानमा ४० भन्दा बढी जहाज छन्।
शेरबहादुरले विश्राम नलिए गगन थापाले हस्तक्षेप गर्ने